ईमेल विशेषज्ञहरुबाट स्वागत सन्देश पाठ Martech Zone
स्वागत सन्देश सुरुमा तुच्छ लाग्न सक्छ किनकि धेरै ग्राहकहरूले एक पटक ग्राहकले साइन अप गरेपछि, काम सम्पन्न हुन्छ र उनीहरू तिनीहरूको भूमिकामा मान्य हुन्छन्। बजारका रूपमा, यद्यपि यो हाम्रो कामको माध्यमबाट प्रयोगकर्ताहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्ने हो सम्पूर्ण कम्पनी संग अनुभव, एक निरन्तर बृद्धि को बढ़ावा को लक्ष्य संग ग्राहक जीवनभर मूल्य.
प्रयोगकर्ता अनुभवको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मध्ये एक पहिलो प्रभाव हो। यो पहिलो प्रभावले अपेक्षाहरू सेट गर्न सक्छ र यदि क्षतिग्रस्त भएमा, ग्राहकहरूले आफ्नो यात्रा तत्काल त्यहाँ अन्त्य गर्ने निर्णय गर्न सक्दछन्।
धेरै कम्पनीहरू अनबोर्डिंग कती महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ भनेर स्वीकार गर्न असफल हुन्छन्। कम्पनीले प्रस्ताव गर्न सक्ने धेरै क्षेत्रका प्रयोगकर्ताहरूलाई शिक्षित गर्न असफलताले कम्पनीको भविष्यको लागि आपतकालीन जादू गर्दछ। स्वागत सन्देश चाँदीको चम्चा हुन सक्छ ग्राहकहरु लाई यो महत्वपूर्ण जानकारी खुवाउन को लागी।
त्यसो भए, सफल स्वागत सन्देश अभियानका भागहरू के हुन्? कम्पनीहरूको अध्ययनबाट जुन प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको स्वागत सन्देश अभियानको साथ मापनमा अनबोर्डिंग गरिन्छ, त्यहाँ केहि साझा विषयवस्तुहरू छन्:
मानव ईमेल ठेगानाबाट पठाउनुहोस्।
प्राप्तकर्ताको नामको साथ विषय पंक्ति निजीकृत गर्नुहोस्।
रूपरेखा ग्राहकहरु के आगे आशा गर्न सक्छन्।
छुट सामग्रीको साथ मुक्त सामग्री र संसाधन प्रस्ताव गर्नुहोस्।
रेफरल मार्केटिंग प्रचार गर्नुहोस्।
तपाईंको रणनीतिहरू तपाईंको ईमेल भित्र कार्यान्वयन गर्दै स्वागत सन्देशहरू क्लिक-थ्रू दरहरू र सment्लग्नता बढाउन मद्दत गर्दछ। केवल ईमेलमा निजीकरण द्वारा खुला दरहरू वृद्धि गर्न पाइन्छ 26%.
ईमेलमा अर्को चाखलाग्दो प्रवृत्ति दृश्यमा आँखालाई द्रुत रूपमा आकर्षित गर्न र यसलाई व्यस्त राख्नको लागि गति एनिमेसनहरू प्रदान गर्नु हो। GIF हरू, उदाहरणका लागि, केवल केहि फ्रेमहरू प्रदान गर्दछ जसले फाईल आकार सानो राख्छ र HTML ईमेलहरूलाई अपेक्षाकृत द्रुत लोड गति कायम गर्न अनुमति दिन्छ।
रेफरल मार्केटिंग स्वागत सन्देश भित्र अर्को ठूलो समावेशी भएको छ मौखिक शब्द मार्फत व्यापारलाई प्रबर्धन गर्न। जब एक ग्राहकले आफ्नो भर्खरको साइन-अप साझेदारी गर्दछ वा एक साथीसँग खरीद गर्दछ भने यो सब भन्दा शक्तिशाली रूपान्तरण युक्ति हुन सक्छ, किनकी पहिलो ईमेल यस बीज रोप्नको लागि उत्तम समय हो। एक सफल रणनीतिक मार्केटिंग प्रमोट गर्न को लागी एक उत्तम रणनीति एक दुई-पक्षीय प्रस्ताव बनाउनु हो। यसले दुबै ग्राहकहरूलाई साझेदारी गर्दछ जसले साझेदारी गर्दैछ र उनीहरूको प्राप्तकर्तालाई रेफरलमा कार्य गर्नको लागि प्रोत्साहन दिन्छ।
यी र अधिकको लागि रणनीति प्रयोग गरेर तपाईंको ईमेल स्वागत सन्देश अभियानहरू स्वस्थ प्रयोगकर्ता अनबोर्डिंग र एक सकारात्मक ग्राहक अनुभव प्रबर्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ। तपाईंको स्वागत सन्देश रणनीति मार्गनिर्देशन गर्नको लागि क्लीभरट्यापबाट तल भिजुअल प्रयोग गर्नुहोस्।
टैग: ईमेल निजीकरणसन्देश सल्लाहअनबोर्डिंग ईमेल सन्देशअनबोर्डिंग सन्देशरेफरल मार्केटिंगस्वागत सन्देश
नयाँ Martech Zone 2019 को लागी लोगो